Arbacada, Agoosto 6, 2014 Khamiis, Agoosto 11, 2016 Douglas Karr
Ma hubo inaad aragtay fiidiyowgan wali. Amaan uma ahan shaqada laakiin waa wax aad u xiiso badan oo ku saabsan mowduuca wargeysyada waaweyn iyo daabacaadda wararka dhaqameed ee raadinaya inay kordhiyaan dakhliga iyadoo loo marayo bandhiga xayeysiinta u dhashay, sidoo kale loo yaqaan waxyaabaha la kafaala qaaday. Waa maxay Xayeysiinta Dhaladka ah? Xayeysiinta Dhaladka ah waa hab xayeysiis khadka tooska ah ah oo xayeysiiyaha isku dayo inuu ku kasbado fiiro gaar ah isagoo ku siinaya waxyaabaha ku jira waaya-aragnimada isticmaalaha. Qaababka xayeysiiska asalka ah